अर्जुन प्रसाद जोशी र पर्वतको नाम पर्यायवाची,उनी हुन पर्वतका ढुकढुकी के के गरे आजसम्म पुरा पढौं – MeroJilla.com
अर्जुन प्रसाद जोशी र पर्वतको नाम पर्यायवाची,उनी हुन पर्वतका ढुकढुकी के के गरे आजसम्म पुरा पढौं
राजनीतिज्ञ स्वर्गीग अमुत प्रसाद जोशीका जेष्ठ सुपुत्र हुनहुन्छ अर्जुन प्रसाद जोशी । पर्वत कुश्मामा राजनीतिक परिवारमा सन् २०१३ सालमा जन्मीनु भएका अर्जुन प्रसाद जोशी उमेरले अहिले ६१ बर्षको पुग्नुभयो ।
उहाँका साथमा आमा बाल कुमारी जोशी आज सम्म संगै हुनुहुन्छ । अर्जुन प्रसाद जोशी आफैमा मिलनसार,तेज सोच भएको नागरीक हुनुहुन्छ । उहाँले पनि अंग्रेजीमा माटर्स डिग्री पुरा गरेका शैक्षिक ब्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँका एक भाई बुहारी ,श्रीमती छोरा,छोरी जीवनका अभिन्न पारीवारीक सदस्यहरु रहनुभएको छ । बिशेषत स्र्वगीय पिता अमृत प्रसाद जोशीको प्रेणवाट उहाले पनि राजनीतीक यात्रा सुरु गर्नुर्भको छ ।
सानै उमेरमा राजनितीक मोह वोकेका जोशी युवा उमेरमै नेपाली काँग्रेस पर्वतको पार्टी सभापति बन्नुभयो । नेपालमा भएका हरेक राजनीतीक लडाई र मुदामा अग्रसर उहाँले काँग्रेसको निम्ती ठुलो त्याग समेत गर्नुभएको छ । स्थानीय देखी राष्ट्रीय छवीमा उहाँ परिचीत राजनेता हो ।
कहिलेही कसैलाई पछि पारौ भन्ने भावना नरहेका अर्जुनले पर्वतेली जनताको धड्कन बन्नुभएको छ । उहाँका काम सामाजी मोह पार्टीको योग्दानले उहाँलाइ पर्वतका जनताको राम्रो साथ मिली रहेको छ । उहाँले २०५६,२०६४ र २०७० सालका चुनावमा पर्वतको प्रतिनीधितव गर्न सफल हुनुहुन्छ । बिज्ञहरु उहाँलाई राजयोग परेका ब्यत्तिको रुपमा हर्ने गर्दछन । पछिल्लो समयमा उहाँलाई हाम्रो पालो आएन भनिए पनि काँग्रेसमा उहाँ जतीको अर्को कोही छैन ।
उहाँले १८ वर्ष सम्म् गरेका काम यसप्रकार छन :–
१. २०५६ सालमा पर्वतको प्रतिनीधीपछि
क.पर्वतमा टुकी बाल्नु पर्न समयको अन्तय
ख.घर घर मा विजुलीको सुविधा
ग.घर घर मा पानीको सुविधा क्रम्स……..
२ . २०६४ सालमा पर्वतको प्रतिनीधीपछि
क.बाँकी ठाँउमा बिजुलीपानीको सुविधा
ख.ग्रामीण सडक पर्वतका हरेक गाँउगाँउमा
ग.युवा सोरोजगार कार्यक्रम
घ.महिलालाइ हाते वुनाहीको सीप –प्ररिणाम नेपाली कागज,नेपाली मुडा संसारमा खपत ।
ङ साक्षर पर्वत घोषण
३.२०७० मा सालमा पर्वतको प्रतिनीधीपछि
क.पर्वत खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषण
ख.ग्रामीण सडकको स्तरउन्नती
ग.भुकम्प पछि जनता आवस कार्यक्रम
घ.शौक्षिक भवन निर्माण,पुर्ननिमार्ण
ङ गरिवीपन हटाउने कृयाकलाप
च.कृषी क्षेत्रमाका जनतालाई मिनीटिलर हलो वितरण
छ.पर्यटकीय नगरी पर्वत निमार्ण
ज.लामा झोलुङ्क पुल निमार्णमा आर्थीक सहयोग
लगायतका धेरै कामहरु उहाले नै गर्नुभएको उहाँको समर्पक कार्यmयका सचिवले गतिबिधी फाइल मार्फत मेरो जिल्लालाई जानकारी दिनुभयो ।
अझै पनि उहाँले धेरै कामहरु गर्न बाँकी रहेकाले पर्वतले फेरी चुन्नेमा पर्वतवासी विश्वस्त सहित उहँ पनि ढृक्क हुनुहुन्छ ।
मनसुन शुरु भएसँगै कालीगण्डकीमा जलयात्रा बन्द	Tuesday, June 19th, 2018